juillet 2019 – filazantsaramada
NY FAHOMBIAZAN’NY OLON’ANDRIAMANITRA?
« Ary rehefa nataony izany, dia nahazo hazan-drano be dia be izy ka efa nisy triatra ny haratony. » Lioka 5:6″ – Manaraka an’i Jesosy: Tokony hanaraka an’i Jesosy ny olon’Andriamanitra; I Petera rehefa avy nanarato naharitra ela, efa afa-po tsy nahazo hatramin’ny alina, kanefa nandeha nanaraka an’i Jesosy nanarato ihany. – Tsy mandeha amin’ny herin’ny tena […]
Publié parfilazantsaramada juillet 26, 2019 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur NY FAHOMBIAZAN’NY OLON’ANDRIAMANITRA?
MIHINANA, TSY MIHINANA, IZA NO MARINA?
« Ny anankiray mino, fa mahazo mihinana ny zavatra rehetra izy, fa ny anankiray kosa malemy finoana, ka dia mihinana zava-maniry ihany. Aoka ny mihinana tsy hanamavo ny tsy mihinana; ary aoka kosa ny tsy mihinana tsy hitsara ny mihinana; fa Andriamanitra no efa nandray azy. » (Romana 14:2-3) Manova zavatra betsaka eo amin’ny fiainan’ny olona iray […]
Publié parfilazantsaramada juillet 18, 2019 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur MIHINANA, TSY MIHINANA, IZA NO MARINA?
RAY MPAMINDRA FO
« Aoka ho mpamindra fo hianareo mba ho tahaka ny Rainareo, Mpamindra fo. » (Lioka 6:36) Ny Kristiana dia manana Ray mpamindra fo, Jehovah no anarany. Ray mandray ho an’ny tenany izay manjo ny zanany. Tian’I Jesosy hananan’ny kristiana koa izany toetra mpamindra fo izany. Amin’ny maha Andriamanitra Azy dia afaka manafay na mamindra fo amin’ny zanany […]
Publié parfilazantsaramada juillet 12, 2019 juillet 12, 2019 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur RAY MPAMINDRA FO
NY FODIAN’NY FIFALIANA AMIN’ANDRIAMANITRA
« Ny fo torotoro sy mangorakoraka Andriamanitra o, tsy mba ataonao tsinontsinona. » (Salamo 51:17b) Inona moa izany fo torotoro sy mangorakoraka izany? Efa akaiky ny alahelo mafy ao am-po izany. Azo ambara hoe fanenenana mafy. Raha ny eto amin’ity Salamo faha 51 ity dia ny fifonan’ny olona iray nanohitra ny sitrapon’Andriamanitra na nanota ka nahatezitra an’Andriamanitra. […]
Publié parfilazantsaramada juillet 5, 2019 juillet 12, 2019 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur NY FODIAN’NY FIFALIANA AMIN’ANDRIAMANITRA